Vanoda Zvinhu - Page 2 of 35 - Kusvirana ne Kusvirwa None Stop!
Nyaya yangu yakaitika ndayenda kuSA kunotsvaga basa ndokubva ndariwana muneimwe restaurant muPretoria. Yainge iri Monday and always this day raigara riri quiet zvekuti manager ndipo paaiyenda paOff and most of the staff taishanda tiri 3 waiters,supervisor nekitchen staff yese saka mostly taicleaner hedu. Pandakasvika ndakaona ndanyorerwa duty rekuti ndicleane walk in fridge then ndizorongedza zvinhu […]
Yedu yekuda kuroorwa iyi, ndainge ndaroorwa nemumwe business men wemuHarare apa ndainge ndakakurira mutown. Murume wangu mari ayinge ayinayo zvekuti zvese zvandaida andipa zvese I even had driver wangu anondiyendesa kwese kwandinoda not kuti handigone kudriver asi ndaitova nayo yangu drivers licence asi ayingoti handidi kuti ufambe wega. Murume wangu aigara ari busy most of […]
Tainge takutoziva kuti vazhinji vedu musi uyu taishanda mboro dzakamira nekupfeka kwaiyita vasikana vekubasa kwedu.Janet ainge ane mazamu mahombe zvekuti chero chainge akapfeka mboro yaitomira chete. Musi uyu Janet akauya akapfeka tracksuit Adidas yainge yakabata pese, beche rake taitowoneka kudhinda pamberi pese rakaita V zvekuti murume wese akaswera akayeverwa naJanet. Janet ainge arimukadzi akaroorwa ane […]
Kutsvaga mari kunomboita kuti munhu ashaye kana nguva yekuzorora kana kutandara nevamwe. Pamba pandairoja ndaingoona landlord kupera kwemwedzi chete apa girlfriend pese paaifona ndaingoti ndiri kubasa zvekuti ndakazongoona munhu akusafona ndikaziva kuti pano ndatorambwa pano.Ndakazoti ndakumutsvaga zvikanzi aaah sha inini I moved on nekuti handikwanise kumirira munhu asingagone kundipawo nguva yekuswera neni kana kundisvirawo zvako […]
I was an ordinary teacher at a certain school in town . we organized a school trip to manicaland to chimanimani bridal falls. I was chosen to accompany students. It was a cluster of 30 pupils boys and girls ma lower Sixth and majority ndaiva dzidzisa so they respected me very much . Ma madam […]
Veduwee hama beche chinhu chinonaka especially kana wava nenguva usina kumbochiwana. Zvino rimwe zuva hangu ndakatoleza paden pandailoja ndirpanze ndakatobairira ma earphone ndichiteerera mhanzi hangu ndichidziya zuva sezvo kwaiva netwumakore neka chando,ndaitogaya hangu zvekugraft becoz ndaiva pa off saka next week yacho ndaiva ne job randaifanira kunopedzisa mwedzi usati wapera ma hours angu awande ndiwane […]
Ko iyo yedu yekungo respecta respecta twuma momz iyi ka yakazondiita ndizvambaradze kamkadzi kano lodger pa next pangu. Ndandichiri pa apprentice ka ndichiwana ka $600 pay kana ka step kaito chinja ndichizvi feela twuma bhebhi twuchinyumbwira nyumbwira ndakazoita madhiri echimbadzo ndichikweretesa mamhoms ema flea market ne ma face ma change money kusvika ndaku kweretwa nema […]
Ini nemudzimai wangu we are all working and have been married for the past 16 years. Tese tiri kudzidza zvikoro zvepamusoro( degrees) ende ini ndirikuita higher degree paneremukadzi wangu tinogara hedu muhHarare. This is how it happened. Sezvamunoziva kuti kana maakuita zvidzidzo zvepamusoro kune magroup discussions anoitika kana muchinge mavakuHigher learning. It was this one […]
Mwana ane beche rinosveta mboro iyeye Believe it or not nyika yedu yonanga kumawere, kwete kumatongerwo enyika but chihure chazara munyika medu. Hatichisina kusiyana neSoddom and Gomora or atleast this small club next to Private Lounge in Harare is. Ndakasvika paHolys ndichiita maSascam rounds hangu ndokushamiswa nezvandakaona twaive twumaMini skirts everywhere you look and ndakascouter […]
Cross-boarder Woman hanzi Ndakanakirwa neMboro yaDriver weGonyet. Makore tichifamba nemaGonyet kuenda Zambia kunotengesa. Murume wangu supported me all the way but dai aiziva zvinoitwa muGonyet umu airwara nehasha. Regai nditsanangure 1 chete scandal pandakanakirwa nemboro yaDriver nemumwe murume muGonyet umu. Ndakakwira Gonyet paWestgate kumanheru ndichienda Zambia. Pandakapinda pakabva papindawo vamwe baba vaive varefu mbichana asi […]